REENOEMANN: September 2010
စက်တင်ဘာမှာ ပျော်ခဲ့ရသည်။ စက်တင်ဘာကြောင့် စိတ်ညစ်ခဲ့ရသည် .... သို့သော် စက်တင်ဘာကို ချစ်သည်
၁၉၈၁ ခုနှစ်ကတည်းက လို့ပြောရမယ်။ စက်တင်ဘာလ ရောက်တိုင်း ပျော်ရွှင်ခဲ့ရသလို၊ ဝမ်းနည်း ကြေကွဲခြင်းတွေနဲ့လည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရဖူးတယ်။ နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရဲ့ စက်တင်ဘာလ ရောက်မှာကို ကျနော် ကြောက်နေမိတယ်။ စက်တင်ဘာလ ရောက်မှာကို ကြောက်နေမိသလို ရောက်လာဖို့ကိုလည်း ကျနော် မသိစိတ်က မျှော်လင့်နေမိတယ်လေ.........။
မှတ်မိနေတာကတော့ စက်တင်ဘာလထဲမှာပဲ ကျနော် ငယ်ငယ်က သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်လို့ ဆေးရုံးတက်ခဲ့ဖူးတယ်။ နောက်မှတ်မှတ်ရရ စက်တင်ဘာထဲမှာပဲ ကျနော် ဆိုက်ကယ်မှောက်လို့ ဆေးရုံးတက်ခဲ့ရ ဖူးပြန်တယ်။ စက်တင်ဘာမှာ မိသားစုဘဝလေး ပြိုကွဲတော့မဲ့ အဖြစ်နဲ့ ကြုံခဲ့ရတယ်။ သို့သော် စက်တင်ဘာကို ကျနော် မမုန်းမိခဲ့ပါ။
စက်တင်ဘာမှာ ကျနော်ရဲ့အိမ်မက်တွေ အကောင်အထည် ဖေါ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အနှစ်နှစ် အလလ စိတ်ဆင်းရဲ ခဲ့ရပင်မဲ့ စက်တင်ဘာကြောင့် ကျနော် ဝမ်းသာမှုတွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးတယ်။ စက်တင်ဘာကြောင့် ကျနော် ပျော်ရွှင်ခဲ့ရဖူးသလို၊ စက်တင်ဘာကြောင့် ကျနော်ဘဝမှာ မျက်ရည်ကျမတက် ဖြစ်ခဲ့ရဖူးတယ်။ သို့သော် ကျနော် စက်တင်ဘာကို ချစ်နေမြဲ။
ပြီးခဲ့တာတွေကို စိတ်မဝင်းစားတက်တော့ ဖြစ်နေတဲ့ စက်တင်ဘာကိုပဲ မှတ်တမ်းတင်လိုက်မိပြန်တယ်။ ၂၀၁၀ စက်တင်ဘာထဲမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျနော် အပျော်ခရီးထွက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပျော်စရာ ခရီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ခရီးက ပြန်ရောက်တော့ သတင်းထူးကြားခဲ့ရပြန်တယ်။ ဒီကြားထဲမှာပဲ အလုပ်က မလေးကုလားက ကျနော်တို့ မြန်မာတွေနဲ့ အိန္ဒိယ ကုလားတွေကို ရန်တိုက်ပေးပြန်တယ်။ သူ့ရဲ့ ရန်တိုက်ပေးမှုကြောင့်ပဲ ကျနော်တို့ အတွက် အခွင့်အရေးတစ်ခု ပိုရခဲ့တယ်။ အဲဒီ မလေးကုလားကို မသိစိတ်ထဲက ကျေးဇူးတင်နေလိုက်တယ်။
သိပ်မကြာပါဘူး။ လစာ တိုးတဲ့ အကြောင်းကြားရပြန်တယ်။ သူဌေးက ကျနော်ကိုခေါ်ပြီး လစာတိုးကြောင့် ပြောတော့ ကျနော် အံ့သြသွားခဲ့ရပြန်တယ်။ ထင်မှတ်ထားတာထပ် နှစ်ဆလောက်ပိုနေခဲ့တာကိုး။ တန်ရာတန်ကြေးပေးပြီး ခိုင်းတယ်ဆိုတာ ကိုကျနော်နောက်ရက်မှာ ကိုယ်တိုင်နားလည် လိုက်မိပါတော့တယ်။
ကျနော်ရဲ့ နာမည်ကို အသံနက်ကြီးနဲ့အော်ခေါ်ပြီး ပေးထားတဲ့ လစာနဲ့ တန်အောင် ပိုဆိုးပက်စက် အဆဲခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ ကျနော်ကလည်း ကျေကျေနပ်နပ်ကို လက်ခံယူလိုက်ပါတယ်။ ပြန်ပြောနေရင်းလည်း မြန်မာပြည်ကို ဗီဇာ မလိုပဲ ပြန်ရောက်သွားမှာကို ကျနော်ကြောက်နေမိတာကိုး။
ဒီလိုနဲ့ အဆိုးနဲ့အကောင်း ဒွန်တွဲနေတဲ့ လောကကြီးမှာ စိတ်ညစ်စရာတွေ ကြုံနေရပင်မဲ့ ကျေနပ်စရာတွေလည်း လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ရပြန်ပါတယ်။ ၂၀၀၉ လောက်ကတည်းက ကျနော်ညီ ဝမ်းကွဲတစ်ယောက်ကို စင်ကာပူခေါ်ဖို့ လုပ်နေတာ။ ရောက်မဲ့ ရောက်လာတော့လည်း စက်တင်ဘာ ထဲမှာပဲရောက်လာပါတယ်။
ကျနော်အတွက် ပထမဆုံးလုပ်ဖြစ်တဲ့ အလုပ်ကတော့ တစ်ခါမှ မကြုံဖူး မသွားဖူးတဲ့ စာပေဟောပြောပွဲကို လည်း ဒီစက်တင်ဘာ ထဲမှာပဲ ကျနော် သွားရောက်နားထောင်ခဲ့ရပြန်တယ်။ မထင်မှတ်တာ တော်တော်များများကို စက်တင်ဘာထဲမှာ ကျနော်ကြုံတွေ့ရပင်မဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ တော်တော်များများဟာလည်း စက်တင်ဘာ ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေခဲ့တယ်။
စက်တင်ဘာမှာ ကျနော်ဘာတွေ ဘယ်လိုဖြစ် ဖြစ်နေပါစေ။ ကျနော် စက်တင်ဘာကို ချစ်တယ်။ စက်တင်ဘာဟာ ကျနော်အပေါ်မှာ ကျေးဇူးတွေအများကြီး ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ စက်တင်ဘာဟာ ကျနော်အတွက် နတ်ဆိုး တစ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့ပင်မဲ့ အဖော်မွန်ကောင်း တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စက်တင်ဘာကြောင့် ကျနော် အသက်ဆက်နေခဲ့တယ်။ စက်တင်ဘာဟာ ကျနော်ကို ဆုတ်ပျက်သတ်သွားအောင် လုပ်နေခဲ့ပင်မဲ့လည်း ကျနော် ချစ်နေစဲပါ......
ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ကျနော်ဆိုတာ ကျနော် ဖြစ်လာဖို့ ကျနော်ကို စက်တင်ဘာက မွေးဖွားပေးခဲ့လို့ပါပဲ.....။
Posted by Ree Noe Mann at 10:56:00 PM4comments:
Posted by Ree Noe Mann at 7:21:00 PM7comments:
သူက သူ့မေမေ့ကို သိပ်ချစ်သူလေး ကောင်လေးတစ်ယောက်... လောကကြီးထဲက ကြိုတင်ထွက်ခွာသွားတဲ့ သူ့ဖေဖေကို လွမ်းဆွတ်နေတတ်သူ... သူ့ဖေဖေ မရှိတော့တဲ့နောက် ရှိသမျှခွန်အားလေးနဲ့ ဘဝကို ရုန်းရင်းကန်ရင်း သူ့မေမေနဲ့ ညီမလေးကို ကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက်နေသူ.. မမျှော်လင့်ပါပဲ ဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့ အကိုအကြီးရဲ့သွေးလေးဖြစ်တဲ့ တူလေးကိုလည်း ချစ်ခင်ယုယ ကြင်နာတတ်သူ... တခါတလေ အားငယ်စိတ်လေး ဝင်တတ်ဟန်ရှိတဲ့ သိပ်ကို နူးညံ့သိမ်မွေ့သူ.. အေးဆေးတည်ငြိမ်သည့် မျက်နှာလေးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ချစ်စဖွယ်လေး အမြဲပြုံးနေတတ်သူ ကောင်လေးပါပဲ..။
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်လေးထဲမှာပဲ သူ့ကိုယ်ပိုင် ဘုရားစင်လေးနဲ့ အိပ်ခန်းလေးကို ရှင်းလင်းလို့ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ဖေ့စ်ဘု့ခ်မှာ တင်ပြခဲ့တာကို တွေ့မိတော့... ကောင်လေးဟာ ဘာသာတရားကို ရိုသေကိုင်းရှိုင်းတတ်သလို အအိပ်လည်း ပုတ်သူလေးပါလို့ ကျွန်မ ပြောမပြတော့ပါဘူး..။ ရေကူးခြင်းကို မြတ်နိုးသလို.. မြန်မာမင်းသား အကကို ကကြည့်ဖို့ နှစ်ခြိုက်သည်ဟု ပြောပြန်သေးသူ...။ အပေါင်းအသင်းခုံမင်ပြီး အနစ်နာခံတတ်သူဖြစ်သလို ကောင်မလေး သူငယ်ချင်းများစွာ ရှိပြီး ချစ်သူရည်းစားထားဖို့ ဘဝက မပေးသေးဘူးဟု တိုးဖွဖွနဲ့ ပြောတတ်သူလေးပေါ့...။
ခရီးထွက်ရခြင်းကို ဝါသနာတစ်ခုလို နှစ်သက်သလို အကြွေးရှိတဲ့ နေ့ရက်တွေကိုလည်း တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာ ဖြတ်ကျော်နေတတ်ပြန်သေးသူ...။ မြူးကြွကြွ သီချင်းလေးတွေ နားထောင်ရင်း ခေါင်းလှုပ် ခြေလှုပ်နဲ့ ပျော်ရွှင်လွတ်လပ်နေချင်သူ... ကော်ဖီ သိပ်ကြိုက်သူ ကောင်လေးက... အရောင်တွေထဲမှာ အစိမ်းရောင်နဲ့ အဝါရောင်ကို ချစ်လွန်းပြန်သေးသတဲ့လေ..။ အဲ့ဒီကောင်လေးက အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကို ကျိတ်ပြီး သဘောကျနေသူပဲ ဖြစ်လို့နေပြန်ရဲ့..။ သူ.. ဘာလို့ ချစ်သူမရှိလဲဆိုတာကို အစ်မဖြစ်သူ ကျွန်မက တစ်ခါတစ်လေ စပ်စုမိတတ်သေး၏..။
“အို... ဒီလောက် မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတွေများတာ တစ်ယောက်ကိုမှ စိတ်မဝင်စားဘူးလား..” လို့ ချစ်ခင်စိတ်တွေနဲ့ မေးကြည့်မိတိုင်း ပြုံးကာ ခေါင်းခါပြတတ်သူပေါ့..။
“ဒါဆို... သိပြီ ကောင်မလေးသူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ အူဝဲလို ချွတ်စွပ်တူတာ မပါလို့မှလား...” ဟု ပြောမိပြန်တော့ တဟားဟားနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အော်ရယ်တတ်သူ ကောင်လေးတစ်ယောက်..။
“မိန်းမ မယူချင်ပါဘူး... မေမေနဲ့ပဲ နေချင်တာ..” လို့ ကောင်ကလေးငယ်ငယ် တစ်ယောက်လို ဆိုတတ်သေးသူပင်..။ ဟော.. ကြည့်..!! အဲ့ဒီကောင်လေးက ကလေးတွေ အများကြီးနဲ့လည်း နေချင်ပြန်သေးသတဲ့။
“ဟင်... မိန်းမ မယူပဲ ဘယ်က ကလေး............” ကျွန်မမေးခွန်း မဆုံးခင် တဝက်တပျက်မှာပဲ သူက ကမန်းကတမ်းနဲ့...
“နိုး.. နိုးး.. ဘရက်ပစ်ထ်နဲ့ ဂျိုလီတို့လို ကလေးတွေ အများကြီး မွေးစားချင်တာ ပြောတာနော်...” ဟု ရယ်ကျဲကျဲလေးနဲ့ ဖြေတတ်သူလေးပါပဲ..။
ကျွန်မ ချစ်ခင်ရတဲ့ အဲ့ဒီကောင်လေးက ကလေးလေး တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး..။ ဒီနေ့လေးဟာ ကောင်လေးရဲ့ မွေးနေ့လေးတစ်နေ့ပါ..။ အစ်မတွေ အများကြီးကို မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဖို့ ဂျီအလွန်ကျတတ်တဲ့ လူကြီးပေါက်စ မောင်ဆိုးလေး တစ်ယောက်ဟာ သူပဲပေါ့..။ သူ့အကြောင်းလေးတွေ တွေးလို့ ချရေးမိရင်း... တခါတည်းပဲ အစ်မတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့အတွက် အကောင်းဆုံး မွေးနေ့လက်ဆောင် ကြော်ငြာလေး တစ်ခုဝင်သွားပါရစေ...။
အူဝဲနဲ့ အင်မတန်တူတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ယောက်ကများ ဒီစာလေးကို ဖတ်မိတယ် ဆိုရင်................... ဆိုခဲ့ရင်............... ပေါ့လေ...။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဆော့ရင်း ကစားရင်း ခဏခဏအော်ဖူးတဲ့ ကောက်စိုက်တေးသွား စာသားလေးကို ဒီမှာပဲ ဒီလိုလေး အကျယ်ကြီး အော်ထားခဲ့ချင်ပါတယ်..။
ယောင်းမရေ... သူငယ်ချင်း လယ်ဆင်းကြစို့လား................!!!!! ဝါးးးးးးး))))))))))))))))))) :P
ကဲ... ဒီလိုနဲ့ မွေးနေ့ ဖယောင်းတိုင် မီးလေးတွေ မှုတ်ငြိမ်းလိုက်ဖို့ အချိန်တောင် ရောက်လာနေပြီ...!!!
Happy Birthday To You..... ပါ ကလေးလေး မဟုတ်တော့တဲ့ မောင်လေးရေ.... အမှတ်တရပေါ့....း)
Posted by Ree Noe Mann at 12:49:00 AM7comments:
ဘာလိုလိုနဲ့ ၂၉နှစ် ပြည့်သွားခဲ့ပြီဗျာ။
အချိန်တွေက မြန်လိုက်တာလို့တော့ မပြောချင်တော့ဘူး။
လူ့ အလိုလည်း နတ်မလိုက်နိုင်သလို
ကျနော့် အလိုကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း မလိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ခုချိန်ထိ ၂၅နှစ်ကနေကို မတက်နိုင်သေးတာ ခက်တယ်။
သေချာတာ တစ်ခုကတော့ သေဖို့နီးနေပြီ။
မွေးနေ့ ကိတ်လေးနဲ့ အတူ လာလည်ကြတဲ့ မောင်နှမများ အားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
Posted by Ree Noe Mann at 12:00:00 AM 8 comments:
"သူ" နဲ့ယှဉ်စရာ ကမ္ဘာမှာမရှိ
တခါတခါ သတိရတတ်တာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင်မေ့လို့။ ။
၂၀၄၁၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ရက်
Posted by Ree Noe Mann at 11:52:00 PM7comments:
အကြိုက်ဆုံး အရောင် - အပြာ
အကြိုက်ဆုံး မြန်မာ အစားအစာ - မုန့်ဟင်းခါး
အကြိုက်ဆုံးရေမွှေး - C K
အကြိုက်ဆုံး ဖက်ရှင်ပစ္စည်း - Converse Bags
အကြိုက်ဆုံး ဖိနပ် - puma
အကြိုက်ဆုံး အဝတ်အစားဒီးဇိုင်း- G2000
ဘလောဂ့်စတင်ခြင်းနှစ် - 2009
ဘလောဂ့်ရေးဖြစ်သွားတဲ့ အကြောင်းအရင်း- စာရေးတာဖတ်တာ ၀ါသနာပါလို့. စာဖတ်တာကို ပိုပြီး နှစ်ခြိုက်လို့
ကိုယ်ပိုင် ဝါသနာ - ဂစ်တာတီးခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း၊ မိုးအေးလျှင် အိပ်ခြင်း :)
ခရီးသွားရင် အမြဲယူသွားဖြစ်တဲ့ပစ္စည်း - A Portable Music Player
စိတ်ကူးထဲက ချစ်သူကောင်မလေးပုံစံ - အွန်စော နှင့် ချွတ်စွတ် တူသော ကျွန်တော့်ကောင်မလေး :D
အမြဲတမ်း လက်ကိုင်ထားတဲ့ ဆောင်ပုဒ် - ပျော်ပျော်နေသေခဲ မော်တော်နေ ရေထဲ
အနာဂတ်သံစဉ်က ညီလေး ညီညီကျော်နဲ့ အမေးအဖြေ လုပ်ထားတာပါ။ ခေါင်းစဉ်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။
Posted by Ree Noe Mann at 11:15:00 PM5comments: